डा.खतिवडा अमेरिकाको मात्रै नभई अन्य ६ देशको राजदूत बन्ने,आखिर उनी मात्रै सक्षम होलान् त? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
डा.खतिवडा अमेरिकाको मात्रै नभई अन्य ६ देशको राजदूत बन्ने,आखिर उनी मात्रै सक्षम होलान् त?
खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय र अमेरिकाको अलावा पनामा, कोष्टारिका, मेक्सिको, आल्साबाडोर, होन्डुरस र ग्वान्टेमालका लागि राजदूतमा नियु`क्तिका लागि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रव`क्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय र ग,णत,न्त्र आयरल्याण्ड र ग,णत,न्त्र माल्टाका लागि गै,रआ,वासीय राजदूतका लागि सिफा,रिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । रातोपाटि बाट
Previous अनसनरत डा. केसी भन्छन्- ‘साधारण माग पूरा गर्न नसक्ने यो सरकार किन चाहियो हामिलाई ?’,हेर्नुहोस।
Next PCR परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा आयो यस्तो कडा परमादेश,,,पढ्नु होस् ।